Taariikhda My Butros » Angel Cats
Last updated: Jun. 30 2020 | 4 min akhri
Ha bisadaha runtii nagu jecel, ama waa aanu idmo isha sahayda cuntada ay?
A Human Can Bilaabe
Ma waxaad u sheegi kartaa waxa aan kuu jeclahay jidka ku wareegsan waxaan idin Raacday, boodaan gal xabadkaaga marka aad yaraan waxaa ka filan, iyo purr xitaa marka itís ma dinnertime? Dabcan, waxaan jeclahay xitaa aad wax dheeraad ah ka dib markii youíve na siin lahayn cunto cat jecel!
Idinkaa iska Complexly,
Mommas waa tabby ah dameeri ah oo leh harag Shabeel qurux badan. Markii aan iyada wuxuu ka helay, waxay ahayd uur leedahay oo ay xadgudbo ó inay ka soo weeciyaan nafsaddooda u leeyihiin iyo bisada iyada oo wadooyinka ku tagay. Waxaan ku jiray oo aan sanadkii hore ee kulliyadda marka waalidiinta aan ku qaatay Mommas iyo Persephone, ka catís Dhuma hal cunug ka harsan. Waxaan ahaayeen shukriya joogitaankooda. Thorndike, cat iyo toban sannadood oo aynu, ayaa dhawaan ku geeriyooday. Our walbahaar badan isaga laga badiyay ahaa weyn, waxaana ay leexsadaan rabto in aad ku sii noolaato guriga catless ah. Waxaan loo baahan yahay waxa aan wici jacaylka feeri,
gaar ahaan sababtoo ah waxaan ahaa ilmo kaliya ee ku nool guriga ka dib markii aan laba ka weyn Walaalo ah ayaa ka guuray. Si aad noo nasiib wanaag, Mommas iyo gabadheeda cadeeyay inuu yahay khabiiro ku takhasusay ee cilmi nafsiga cat; waxay garanayeen sida loo is ogow of Shacabka dareenkoodu u baahan yahay.
Mommas magaceeda u kasbaday waalidka aan dhaqmaadka oo ii sida haddii aan iyada dhal. Muddo yar ka dib guriga soo socda nala, Mommas bilaabay nagu wareegsan soo socda si aad u aragto waxa aanu ahaayeen ilaa. Mar kasta oo midkayana ku qayliyey, Mommas ag fadhiisatay cagihii iyo sugayay samir ilaa ay maamulaan yaabaa iyada jacaylka iyo raaxada.
Ka dib sano ee ku nool isla magaalada, imid waalidkey in Pennsylvania la Mommas iyo Persephone, halka ay hablahayaga iyo waxaan ku hadhay ee Massachusetts. Aabahay waxa loogala jeedaa wax walba oo igu, iyo waxa ugu dambeeya ee aan Waligeed doonayay ahayd inuu keli ku dhinto. Laakiin hal habeen, xumaa aan ka baqanayay in ay rumowday u muuqday. Walaalahey la ii soo dhowdahay leh qaar ka mid ah wararka aad u murugo: Our hooyo u yeedhay si uu ugu sheego in guriga yimaado sheíd si aad u hesho aabbahay jiifa qolka fadhiga ?dhegta; ayaa waxa uu ummad taktay, halka daawashada telefishanka. Si aan gargaarka, inkasta oo, hablahayaga sheegay in aabbahay weli ma keliya ayaa daqiiqado ugu danbeeyay ee nolosha. Saaxiib A kuwo aan jecel la joogi jiray: Mommas.
Mommas lahaa fatherís Saaxiibkiis joogto ah marka aan hooyaday safray shaqadeeda. Habeen ayaa sheegtay in ay isaga hurdo weligeed jiraysa helay, iyada oo sidoo kale la helay Mommas ag fadhiyey kooxdiisa. Xitaa sida hooyaday ka badan isaga qayliyey, cat tani ma lahaa aabbahay ka tago. Marka ambulance u yimid, Mommas iyo dib qoondeeyey qoday haadeed iyadii soo geliyey rooga at isku day kasta si ay uga dhaqaaqo.
Ugu dambeyntii, hooyaday iyada dagaan, qolka hurdada si Munaasabaddaasi ayaa qaadan karta jidhkayga fatherís iska.
Geeridayda fatherís ka dib, Mommas lagu waday inuu habeen iyo maalinba hooyaday iyo, iyada oo dhan jeer adag. Waxay sameeyey gurigii u muuqdaan kuwo cidlo ka yar. Iyadoo iyada ixtimraam, Mommas caawiyay yareeyo xasuus xanuun badan. Mar kasta oo hooyaday ama aan ku dhawaaqay, Mommas samir fadhiistay noo soo socda, kor ugu ciddiyihii orsada ayaa ah in uu taabto noo gacanta ama gacanta, iyo ilmada ka leefleefeen Wajiyadooda our si aan u ogaano waxay ahayd dhow.
Waxay joogay aad u degan si aysan na rabshin; ayay u muuqatay in ay ogaadaan in aannu u baahnayn in ay murugoon. Ka dib markii aan joojino oohinta, Mommas bilaabi lahaa loudest ah, ugu purr kulka. Markaas fuulin sheíd gal mid ka mid ah dhabtooda noo. Waxaan donít ogaato sida hooyaday oo aan ka heli lahayd iyada oo aan Mommas iyada oo waayahaas.
Ku dhawaad ​​ah sanad ka dib markii aan dhimasho fatherís, Mommas noqday jirran la koraan. Hadii aan la daaweyn kansarka qaali ah iyo daawo, iyada ayaa ku dhintay waxaa laga yaabaa. Waxaan kama waaban in ay daryeelaan iyada. Waxaan couldnít iyada hadda lumin.
Ka dib dhan, iyada oo ah xubin ka mid ah qoyska ahaa. Sida waxay bilowday inay pound ku daatay kadib markii pound, waxaan weligiis la Mommas shaqeeyay si ay u hubiyaan way cuntay cunto dheeraad ah inuu qarsado miisaanka kor u. Ugu dambayntii, iyada yaraaday laga soo bilaabo iyada caadiga ah tiradaasi iyo toban-pound si yar oo todoba pounds. Markii aan go'aansaday in iyada qaadan in xoolaha ee dawaynta ilaysku, shaqaalaha noo sheegay theyíd ma arkin bisad sida Mommas; waxay ahayd in caafimaadka ka khayr badan bukaanada kale ee miisaanka this. Maalinta iyada daaweynta, Mommas u iishay dhan farsamo dhakhtarka xayawaannada, purring oo iyaga loo oggolaado in salaaxdo.
Mahdiya ayaa sheegaya in Mommas inay caafimaad wanaagsan laabtay baan ahay. Nasiib darro, waxaan sanadkan Persephone guuldarro diabetes iyo gabow. Waa wax la yaab in ay daawadaan Mommas qaban on dhaafa sida kuwo badan idlaan ka hor iyada. Waxay hadda waa madaxa qoyska ah oo ay ku jiraan laba eeyo badan oo aan ku qaaday jidadka ka baabbi'iso. Waxa kale oo aanu hadda leeyihiin Dutchess, bisad yar oo cusub kuwaas oo ku xadgudbey oo dayacay. Dutchess Ilaaliye Mommasís dhaqdhaqaaq kasta oo, barashada sida loola dhaqmo, meel ay aadaan, iyo waxa la cuno.
Mommas ayaa da'doodu u badan oo. Waxay inta badan u khafiif ah waa hadda, iyo timaheeda uu ka lumay inta ay luster. Waxay way xasilloon tahay, iyo waxa ku jira inay ku fariistaan ​​qorraxda halka qurxinta iyada dhogorta. Inkastoo aan ogahay in markii iyada waxaa xadiday, Waxaan isku dayaa in aan u malaynayaa in ay ku saabsan. Halkii, Waxaan culeyska saaray waxa Mommas ayaa i baray. Waxa aan bartay in ka badan ka cat ku saabsan jacaylka shuruud la'aan, ixtiraam, masuuliyad iyo qoyska badan ka qof kale. Kuweed waa jacayl ah in erayada ma ku filan ku tilmaami kartaa.
Iskusoo wada duuboo kale, Mommas waxaa sabab u ah baan u noqday tiknoolajiyadda ee caafimaadka xoolaha. Waxay igu dhalisay ku hamiday ah in aan si dhab ah u qaataan iyo qaban gacaliyo. Waxa aan bartaa si ay u daryeelaan kuwa aan ku hadlin dhibaatada, oo aamusnaan badan yahiin noogu iyo weydiin kaliya ee jacaylka aan soo.
Daacad u ah saaxiib run noqon mid ka mid ah u Raaxaysay ugu weyn ee nolosha karaan.
Ma jiraan dad kale, xoolaha ama aadanaha, kuwaas oo ay xanuunsanayaan oo aad u baahan tahay by ay kooxda?
Sida loo wajaho Haweenka Haddii aad tahay qof xishood badan?
Booqashada Key West, Florida la xayawaankaaga
4 Sababaha Profile Photo A wanaajin doonaa Search For Love